Iarhente yakho iyabamba | Martech Zone
Iarhente yakho iyabamba
NgoLwesine, Julayi 28, 2011 NgoLwesine, Julayi 28, 2011 Douglas Karr
Izolo, bendithetha eDetroit kwikomkhulu lombutho wamanye amazwe onenkxaso mali ezininzi. Inkcazo-ntetho yam yayiyiyure ubude kwaye ijolise kwindlela yokujonga kubahlalutyi ngokwahlukileyo… bafuna ulwazi ababengalwazi nokuba lukhona nokuba lubachaphazele njani ishishini labo kwi-Intanethi. Inkcazo-ntetho yayinophengululo lwe-rave kunye neeyure ezimbini emva koko, bendingekashiyi iDetroit. Bendihleli ndincokola neenkokheli zeNtengiso ezivela kwiinkampani ezininzi.
Umtya oqhelekileyo wencoko kukuba babengenalo nofifi lokuba izixhobo zikhona. Omnye umsonto oqhelekileyo yayikukuba zonke iinkampani zazinonxibelelwano olukhulu kakhulu neearhente zikazwelonke nezamazwe aphesheya. Babengonwabanga kakhulu ngayo.
ArhenteUbugcisa bokubamba okanye bokusebenzisa amandla; imeko yokusebenza; isenzo; izixhobo.
Ndibuze ukuba loluphi ulwalathiso kwiiarhente zabo ezibanike lona. Akukho. Ndibuze ukuba iiarhente bezikhona na kumsitho. Nope. Ndibuze inkqubo abathe bangena kuyo kwintengiso kunye nearhente yabo. Kwakufuneka bacele ikowuti. (Ngaba unokucinga ukuba ubambe ingqungquthela yentengiso kwaye iarhente yakho ayikho?)
Eli asilo bali linye. Ngapha koko, sisebenza ngokusondeleyo nenani leearhente zabathengi bethu ngoku kwaye zihlala zifana. Siphetha ngokuba ngumcebisi othenjiweyo kwinkampani, kwaye iarhente ithi iyakubeka ixabiso ndawonye. Bakha indawo, silungisa indawo. Bazithengisa kwisisombululo, siyiphumeza ngokuchanekileyo. Babiza intywenka yemali, sihlawulisa ukuba yintoni ixabiso lokuzibandakanya kwinkampani.
Kukho umahluko omkhulu phakathi kwe-arhente kunye nekontraka engaphantsi. Ukuba wenza ukuba uphawu lwakho luphuhliswe kwaye yiprojekthi ethatha ixesha apho inkampani iphosa isikhokelo sophawu esandleni sakho… awuyiyo iarhente, uyikontrakta. Ukuba awuthethi ngeentsingiselo kunye namathuba kumthengi wakho… awuyiyo iarhente, uyikontrakta engaphantsi. Ukuba umxhasi wakho ukufownela ebuza ngezixhobo zamva nje okanye iitekhnoloji… awuyiyo iarhente, uyikontrakta engaphantsi.
Igama elithi arhente livela kwigama elithi agentia, elivela kwizixhobo. Ithetha ukuba "ukwenza" or "ukwenza" or "ukwenza intshukumo". Xa ucinga ngegama, linika umfanekiso wokudityaniswa kwabantu abanegunya lokudlulisela imisebenzi kubo efuna ubungcali babo… bayingalo okanye ulwandiso lweshishini lakho.
Iikontraki ezincinci zibonelela ngamaxabiso. Iikontraki ezincinci zibonelela ngamaxesha. Iikontraki ezihlawulelwayo ziyahlawulwa ngaphandle komngcipheko. Iiarhente zibonelela ngesikhokelo, ukubonelela ngesicwangciso-qhinga, ukubonelela ngokugxila, ukubonelela ngeempendulo… kwaye kufuneka babe nomngcipheko ngokunjalo.
yethu inkampani ibonelela ngazo zombini. Senza ikontrakthi encinci kwaye sisebenza njengearhente kwabanye. Ndiyathemba ukuphalaza konke ukungahambelani ekugqibeleni, kodwa iiprojekthi ngamanye amaxesha zigcina izibane zikhanya ukuze sizithathe. Asisoloko sonwabela bona, nangona. Xa iprojekthi inikwe ikhontrakthi kuthi, abathengi bahlala beyalela iimfuno kwaye asinalo igumbi kuthethathethwano ukugqitha okanye ukulungelelanisa okulindelweyo kuluncedo lomthengi.
Njengearhente, ngamanye amaxesha siphikisana nomthengi. Ngamanye amaxesha siyabagxotha. Iinkampani ezininzi zisetyenziselwa ukuqesha iikontraki ukuba zilibale ukuba kunjani ukuba nomqeqeshi, inkokeli kunye neqabane elikuxelela into imfuneko ukwenza. Ukuba ufuna ukuphumelela, ufumana umqeqeshi. Ukuba ufuna omnye umntu akubalekisele ugqatso ... sukulindela ukuphumelela. Iiarhente zivelisa abaphumeleleyo.
Ndiyalikholelwa ilizwi Nkonzo lelinye lawona magama asetyenziswa gwenxa kushishino lokuthengisa. Ndinqwenela ukuba iiarhente ezingaphezulu zibize nje kwiivenkile. Iivenkile zombane, iivenkile zewebhu, iivenkile zemidiya yoluntu, iivenkile zevidiyo. Ngevenkile, ungena, uhlawule kwaye uphume. Ewe, ivenkile ayinakukwazi ukuyalela umvuzo ofanayo nowenziwa yiarhente… mhlawumbi yingxaki leyo!
Usetyenziso lweWebtrends ukuqhubela phambili kwiiWebtrends zeNtlalo
Imidiya yokuncokola kunye nesiCwangciso sakho soNxibelelwano ngeShishini